“यो जित जनताको हो ” – रोल्पा समाचार
२०७४ मंसिर २३, शनिबार १७:५५ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७४ मंसिर २३, शनिबार १७:५५ गते
–दिपेन्द्र कुमार पुनमगर (सिजल)
रोल्पा ख प्रदेश सभा सदस्य
प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभामा विजयीको नजिक छ भने प्रदेश सभामा सदस्यमा विजयी भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता एवं रोल्पा ख का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ संग विजय लगत्तै रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक मानसिंह बिक मतगणना स्थलमा विश्वकर्माले गर्नुभएको कुराकानीको प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई विजयी भई सक्नु भएको छ अब तपाई कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
मैले पहिले राजनीतिक जीवनमात्रै थियो । अब जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने रोल्पाली जनताले जो अवसर प्रदान गरेका छन् । सर्वप्रथम त सबै रोल्पाली मतदातालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै रोल्पा जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने सबैमा पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै मलाई जसरी पार्टीले उमेद्वारी दिनका लागि निर्णय गरेपश्चात रोल्पा जिल्लामा विजयी हुनका लागि सबै हिसावले म लगायत मेरो पार्टी, बाम गठबन्धनका, नेता, कार्यकर्ता, जनंता लगायत सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । अब नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ । जिम्मेवारीलाई नयाँ ढंगले बहन गर्नका लागि सबैको प्रयत्नका र मेरो भूमिका जिम्मेवारी तवरले लाग्नेछु । मेरो पहिलेको भुमिकामा अझै बढी स्पाटिलो भएर लाग्न जनताले मतदान गरेका छन् । यो अमूल्य जनताको मतलाई जनताको जीवन स्तर परिवर्तनका लागि बढल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
तपाईको विजयलाई रोल्पालीले कसरी ग्रहण गर्ने ?
मेरो जित मात्रै होइन, यो आम जनताको जीत हो । त्यसैले आम परिवर्तन, मुक्तिकामी जन समुदायको जीत भएको छ । यो रोल्पाली जनताले पनि स्थायी सरकार, दीगो विकासका लागि चाहेका रहेछन् । त्यसैले गर्दा यो जित आम जनताको जीत हो । त्यसैले सबैले आफ्नो मत जाहेर गरेर विजयी गराएपछि आफ्नो जित नै सम्झे हुन्छ ।
कलिलै उमेरमा परिवर्तनको पक्षमा उभिदै २०४३ सालमा अ.ने.रा.स्व.वि.यू (छैठौ) को साधरण सदस्यता प्राप्त गरी राजनीति जीवनको शुरुवात गरेको थिए । २०४३ सालको कथिट राष्ट्रिय चुनाव विरोधमा कार्यक्रमहरुमा संलग्न हुँदै २०४६ सालको पंञ्याती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि न.क.पा. (मसाल) ले लिएको निर्णयलाई भूमिगत रुपमा कार्यन्वयन गर्दै आएको थिए । २०४६ सालमा पञ्चायको अन्त्य पश्चात विद्यार्थी संगठनकै जिल्ला सदस्य हुँदै २०४८ सालमा ने.क.पा. (एकता केन्द्र) को सदस्यता प्राप्त २०५० सालमा ने.क.पा( एकता केन्द्र) को सदस्यता प्राप्त गरेको थिए । २०५० साल देखि २०५६ सालमा विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्यतामा रही काम गरेको थिए । २०५८ सालमा ने.क.पा. (माओवादी) रोल्पा जिल्ला संगठन समितिको सेक्रेटरी भएर २०५९ सालसम्म काम गरको थिए । पाल्पा जिल्लाको इञ्चार्ज २०६३ देखि हालसम्म रोल्पा जिल्लाको इञ्चार्ज रुपमा कार्यरहत रहेको थिए । ०५९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, २०६२ सालमा पार्टीको पोलिट व्यूरो सदस्य, पार्टीको चुनबाङ बैठकले विग्रेड कमिसारको जिम्मेवारी दिएको थियो । २०६२ चैत्रमा पाल्पामा माइन विष्फोट हुँदा बायाँ हात पुरै र दायाँ हात अधिकांश गुमेको छ भने दायाँ कान फुटेको अवस्थामा रहेको छ । २०६४ सालदेखि जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग सङ्गठनको अध्यक्ष पदमा रहँदै आएको छु ।
जनताको सेवा कहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो ?
देश हालसम्म पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहँदै काम गर्दै आएको छु । जनताको सेवा अविचलित वा निरन्तर रुपमा गर्दै आइयो । तर जनप्रतिनिधिको रुपमा होइन पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा जनताको सेवा गरे भने अब जनप्रतिनिधिको रुपमा जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । आजबाट जनताको सेवामा लाग्न प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । यो अबसरलाई मैले पूरा गर्नेछु ।
रोल्पाली जनताले तपाई र तपाईको पार्टीलाई किन भोत दिए ?
मलाई र मेरो पार्टीलाई मात्रै भोत दिने होइन । म वाम गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रुपमा प्रस्तुत भएको हँु र हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को प्रस्तावित उम्मेद्वार भएकोले हाम्रो संयुक्त घोषणा पत्रद्वारा हाम्रो कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छौँ । त्यही हाम्रो प्रतिवद्धता अनुसार समृद्ध रोल्पा, सुखी रोल्पालीका लागि हाम्रो घोषणा पत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छौँ । हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ । हाम्रो रोल्पा जिल्ला बनाउनको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य वर्षमान पुनमगर र प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद केसी र म लगायत हाम्रो बाम पार्टी सबैको सहकार्यबाट सुखि रोल्पाली बनाउने छौं । त्यो गर्नका लागि समृद्ध अमूर्त होइन मूर्त दिनु पर्दछ । गासँ, बास, कपास, रोजगार, आर्थिक उत्पादन, लगायत सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा सम्बृद्धको योजना निर्माण गरेका छौँ । त्यसै अनुसार आम रोल्पाली जनतालाई नयाँ स्तरमा पु¥याउनका लागि हामी निरन्तर लागि पर्नेछौँ ।
तपाईलाई रोल्पा जिल्लाको विकासवादी नेताको रुपमा पनि चिन्छन् तपाईले यस भन्दा अगाडी राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै गर्नुभयो अब जनप्रतिनिधि भएर कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले हिजो पनि जनताको सेवालाई नै अगाडि बढाएको थिए । आज जनप्रतिनिधिको रुपमा जनताले मलाई अबसर प्रदान गर्दा मैले त्यसलाई जिम्मेवारी ढंगले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनेछ । प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा सहकार्य गरी अगाडि बढाउनेछु । विकास निर्माणका केही अधुरा कामहरु बाँकी नै छन् । भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल पुलेसा, विद्यालय, स्वास्थ्यक्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिनेछु । म थबाङदेखि तल डुव्रिङसम्मको हाल रहेका साविकका २६ वटा गा.वि.स.मा समान ढंगले विकास गर्नेछ ।
यतिबेला कसलाई सम्झिनु हुन्छ ?
मैले यतिबेला सबै भन्दा बढी यो महान परिवर्तनको लागि जीवन बलिदान दिने जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका महान शहीदहरुलाई सम्झिन्छु । तिनै शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । साथै घाईते अपाङ्गहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । तिनै शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग लगायत यो युगान्तकारी परिवर्तनको लागि योगदान दिने सबैलाई यो श्रेय दिन चहान्छु । साथै आम रोल्पाली २ नं. क्षेत्रका मतदाताहरुलाई सम्झिन चहान्छु ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ की ?
यो निर्वाचन एउटा महान र ऐतिहासिक कार्य हो । यो महान कार्यमा हामी एउटा प्रतिनिधिको रुपमा उमेद्वारी दिएका थियौं । त्यो उमेद्वारीलाई आज रोल्पा क्षेत्र नं. २ का जनताले प्रतिनिधिमा परिवर्तन गरि दिनुभएको छ । त्यसैलै आम सबैतह र तप्कामा मतदाताहरुमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै यो निर्वाचन शुरुवातदेखि सम्पन्न हुँदासम्म हाम्रो विजयको सुनिश्चित गर्ने सबै पार्टी, नेतृत्व, कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र आम नागरिक समाजलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै जो मसँगै प्रतिषपर्धामा सहभागी हुने मेरो प्रतिद्वन्दी खगेन्द्र प्रकाश हमाललाई पनि आगामी दिनको राजनीतिक सहयात्रा फेरी साथमै हुनेछ । साथै हाम्रो रोल्पा जिल्लाको विकासका लागि सबै एक भएर अगाडि बढ्नका लागि सबै तह, निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । तपाईको लोकप्रिय पत्रिका मार्फत जसरी हाम्रो विजयको अभियानलाई शुरुदेखि साथ दिएर हाम्रो परिवर्तनको आन्दोलनलाई साथ दिनुभयो । आगामी दिनमा पनि परिवर्तन, अग्रगमनको पक्षमा रोल्पा समाचार साप्ताहिकको प्रगतिको कामना गर्दछु । आगामी दिनमा पनि साथ दिनुहोला ।
२०७४ मंसिर २३ गते विजयी हुँदै गर्दा गरिएको कुराकानी)
प्रतिनिधिसभामा वर्षमान पुनमगर ‘अनन्त’, प्रदेश सभामा कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ र दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ विजय
ग्लोबल आईएमई आकांक्षा छात्रावृत्ति वितरणको शिलसिलामा रोल्पामा आउनुभएका राप्ती अञ्चलन प्रमुख सोमलाल लिम्बु नेम्बाङसँग ग्लोबल आईएमई आकांक्षा छात्रावृत्ति, आईएमई्र एबथ लगायतको विषयबस्तुमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाका प्रतिनिधिले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७४ आश्विन १९, बिहीबार ०५:५३ गते २०७४ आश्विन १९, बिहीबार ०६:४४ गते
1 रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै हजुरको परिचय बताइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ । धन्यवाद रेशम सर...